मुख्य पृष्ठविचार विश्लेषण स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीमहिनावारी रोक्न प्रयोग गरिने औषधि स्वास्थ्यका लागि घातक
डा. बालकृष्ण शाह, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
महिलामा महिनावारी हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेर (कसैमा आठ वर्ष)मा सुरु हुन्छ । ४५ देखि ५५ वर्षको उमेरपछि महिनावारी रोकिन्छ ।
हरेक महिना २८ दिनको अन्तरपछि महिनावारी हुनेगर्छ । धेरैजसो किशोरी वा महिलाले महिनावारी समयमा नहुने, हुँदा धेरै दुखाइ हुने, दुखाइको कारण दिनचर्यामा समस्या आउने, अत्याधिक रक्तश्राव हुने गुनासो गरिरहेका हुन्छन् ।
महिनावारीको समयमा पेट दुख्नुलाई सामान्य मानिन्छ । तर, अत्याधिक दुखाइ भएमा, दुखाइ सहन नसकेमा महिलाहरू औषधि पसलमा गएर डाक्टरको सल्लाहबिना पेनकिलर (दुखाइ कम गर्ने औषधि)को सेवन गर्ने गर्छन् । त्यसैगरी, धेरै महिला तथा किशोरीहरूले कुनै विशेष कारणवश महिनावारी पर सार्ने औषधिको पनि सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
महिनावारी समयमा नहुने, महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने, महिनावारीमा कम रगत जाने, महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने धेरैजसो महिलामा देखिने महिनावारीसम्बन्धी समस्या हुन् ।
महिनावारीको समयमा अत्याधिक पीडा हुँदा वा दुखाइ सहन नसकेको खण्डमा दुखाइ कम गर्ने औषधिकै सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, यस्तो औषधिको सेवन गर्नुपर्दा सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
धेरैले आफूखुसी दुखाइ कम हुने औषधिको सेवन गर्छन् । यसरी आफूखुसी दुखाइ कम हुने औषधिको सेवन गरेमा पीडादायी महिनावारी हुनुको कारण थाहा नहुन सक्छ । र, यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
कहिलेकाहीँ अन्य कारणले पनि महिनावारीको बेलामा पेट दुख्ने समस्या हुनसक्ने हुँदा पेट दुख्ने कारण पहिचान गरी समयमा पीडाबाट छुट्कारा पाउनुपर्ने हुन्छ । गम्भीर समस्या आउन नदिन समयमा नै सामान्यरूपमा महिनावारीको समयमा पेट दुख्दा वा दुखाइ कम गर्ने औषधिको सेवन गर्नुपरे पनि डाक्टरकै सल्लाहमा गर्नुपर्छ ।
महिनावारीको समयमा दुखाइ कम गर्ने औषधि मात्र नभई धेरैजसो महिलाले महिनावारी रोक्ने अथवा महिनावारी अगाडि–पछाडि सार्ने औषधिसमेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने थाहा हुँदहुँदै पनि महिलाहरूले पूजा, चाडपर्व, यात्रा तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण काममा सहभागी हुन महिनावारीलाई पर सार्ने औषधि पटक–पटक सेवन गरिरहेको पाइन्छ ।
महिनावारी रोक्न प्रयोग गरिने औषधि स्वास्थ्यका लागि उचित मानिँदैनन् ।
महिनावारीलाई अगाडि वा पछाडि सार्ने औषधि प्रयोगले महिलाको शरीरमा हर्मोनको परिवर्तन हुने हँुदा यसले गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । औषधि प्रयोग गरेपछि महिनावारी चक्र बिग्रिने र महिनावारीमा अनियमितता हुन्छ ।
महिनावारी अनियमित भएपछि महिनावारी समय–समयमा नहुने, ढिलो हुने, महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने, ढिका–ढिका रगत जाने, रगतसँगै चोक्टा पनि निस्कने, अत्याधिक दुखाइ हुनेदेखि लिएर विभिन्न जटिल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
यस्ता औषधिहरू सकभर प्रयोग नगर्नु नै उचित हुन्छ । औषधि प्रयोग गर्नै परे विशेषज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
(मोरङ सहकारी अस्पतालमा कार्यरत डा. शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)